काठमाडौं, १९ कात्तिक — सामाजिक सञ्जालमा अचेल एउटा फोटो खुबै शेयर भइरहेको छ । आजभन्दा १६० वर्षअघि आयरल्यान्डको बेल्फास्टमा खिचिएको यो श्यामश्वेत तस्वीरलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् त, त्यसमा लुकेको छ डरलाग्दो रहस्य ।
यो तस्वीर एउटा मिलमा खिचिएको थियो । तस्वीरमा महिलाहरूले क्यामरामा पोज दिइरहेको देखिन्छ ।
तस्वीरमा देखिएकी एक महिलाकी नातिनीले १६० वर्षपछि आफ्नी हजुरआमा समेत भएको फोटो फेसबूकमा शेयर गरिन् ।
झट्ट हेर्दा तस्वीर सामान्य देखिन्छ तर ध्यान दिएर हेर्दा यसमा भाइरल हुने एउटा कुरा छ । फोटोमा एक महिलाको काँधमा एकजनाको हात मात्र देखिन्छ तर मानिस नै देखिन्न । त्यो भूतको हात हो कि यो कुनै ट्रिक फोटोग्राफी हो ?
मानिसहरू यसमा अनेकथरी अनुमान लगाइरहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
सवारी साधनमा कर बढाउने निर्णय रोकियो